စိမ်းလန်းအေးချမ်းသော ထင်းရူးတောများကြားမှ ….ကလော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » စိမ်းလန်းအေးချမ်းသော ထင်းရူးတောများကြားမှ ….ကလော
စိမ်းလန်းအေးချမ်းသော ထင်းရူးတောများကြားမှ ….ကလော
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 25, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 37 comments
1 ကလောဘက်ကနေ တက်လာတဲ့လမ်းကလေးကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့
2 စိုင်းစိုင်းသီချင်းထဲမှာပါတဲ့ ဒေါ်လှကြီး
3 ထင်းရူးပင်တန်းနဲ့ မစိုက်ရသေးတဲ့ ယာခင်းလေး
4 ဒီလမ်းကလေးအတိုင်းလိုက်သွားရင် ထင်းရူးမြိုတော်လို့ ခေါ်တဲ့ကလောမြို့ကိုရောက်မယ်လေ
5 ကလောမြို့ တောင်ပေါ်က မြင်ကွင်းလေးပါ
6 ကလောမြို့ ယင်းမာပင်ဘက်အထွက်မှာမြင်ရတဲ့ သစ်ပင်ကြီးနဲ့တောင်တန်း
7 အထီးကျန် သစ်ပင်
9 ကလောမြို့ကို ၀င်လာတဲ့လမ်းကလေး (အနောက်မြောက်ဘက်)
10 ကားလမ်းမကို လှမ်းမြင်ရတာလေးပါ
11 တောင်တွေထဲကို တိုးဝင်တော့ မယ့် လမ်းကလေး
12 ကလောက အပြန်လမ်းမှာမြင်ရတဲ့ လှပသောမြင်ကွင်းလေး
13 မြို့အ၀င်လမ်းက စိန်ပန်းပြာလမ်းကလေး
15 ထင်းရူးပင်ကြားက တောင်တန်းကြီး
16 တောင်ကြားတွေလမ်းက တောင်အဆင်းလမ်းလေး
17 ဒီကျောက်ဆောင်လေးမြင်ရင်အဝေးရောက်နေတဲ့ ကလောသူကလောသား လွမ်းမှာကတော့ အသေအချာ
18 ဒီတောင်ဆင်းလမ်းလေးအတိုင်းသွားရင် အောင်ပန်းမြို့ကိုပြန်ရောက်တာ
“စိမ်းလန်း အေးချမ်းသော ထင်းရူးတောများကြားမှ ကလော………….ံ”
ကျနော်အောင်ပန်းကို ပထမတစ်ခေါက် 2011စက်တင်ဘာမှာရောက်တုန်းက ကလောကိုခဏရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကတော့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီငှားသွားခဲ့တာပါ။
ကလောမြို့မှာအလုပ်ကိစ္စလုပ်စရာရှိတာလုပ်တာရယ် နဲ့အသွားအပြန် မှလေးနာရီလောက်ဘဲကြာခဲ့ပါတယ်.။
ဒီတစ်ခေါက်အောင်ပန်းကို ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ပြန်တော့ ကလောမှာ ညအိပ်မယ်စိတ်ကူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အောင်ပန်းမှာက လုပ်စရာများများ ကလောမှာက နည်းနည်း။
ဒါနဲ့ဘဲအောင်ပန်းမှာညအိပ် ပြီး ခြောက်မိုင်လောက်ဘဲဝေးတဲ့ကလောကို သွားဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပုတ်ပြတ်ငှားသွားမယ်လို့ တွက်ပါတယ်။.
သွားမှာက ကျနော်နဲ့အဖော်တစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်ငှားရင်း နှစ်စီးငှားရမယ်။
နောက်မန်းလေးသားဆိုပြန်တော့ သူများနောက်က ထိုင်မလိုက်ချင်။
အောင်ပန်းလမ်းဆုံကကယ်ရီတွေကိုမေးလိုက်တော့ မနက်ကိုးနာရီကနေ ညနေလေးနာရီ
သူတစ်ကွာတထည့်ထားတာကို ပြန်ချန်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ဈေးတည့်သွားပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ဘဲ ဆိုင်ကယ်ကို ကိုယ်တိုင်မောင်းလို့ သာယာသောလမ်းကလေးကိုထိတွေ့ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
မြို့ခံလူများကပြောတာ တော့ အခုဟာက အပင်ပေါက်လေးတွေပါတဲ့။
ကားလမ်းကအပေါ်မှာ အောက်မှာက မီးရထားလမ်းနဲ့ယာခင်းလေးတွေကယှဉ်လျက်.
အခုတော့ ယာခင်းတွေကထွန်ယက်စ မို့ခြောက်သယောင်း။
အဲဒီနားမှာ ပထမတစ်ခေါက်တုံးက မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်ကြီးကဟီးလို့။
အဲဒီနားမှာ သဘာဝကျောက်တောင်က နေကျောက်စရစ်ခဲထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှိပါတယ်။
အေးချမ်းသော သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော မြို့လေးတစ်မြိုပါ။
ကျုပ်တို့ဆီမှာ အရမ်းပူတဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရပေမဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ရှုခင်းလေးတွေကို
မြင်လိုက်ရတော့ အေးချမ်းသွားသလို ခံစားရပါတယ်…
ဆက်တင်စရာကတော့ မြင်းမထိ ပင်းဒယ နဲ့ရန်ကုန်ကရွှေတိဂုံနဲ့ ကြာပန်းတွေကျန်သေးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ… အားပေး ခံစားလျှက်ပါ… စောင့်မျှော်နေပါတယ် …
ကိုပေါက်ရေ နံပါတ်(၁၁)က တောင်တွေကို တိုးဝင်တော့မယ့် လမ်းလေး ရှေ့ နည်းနည်းသွားရင် လမ်းကြေးကောက်၊
လူစာရင်းမိတ္တုပေးရမယ့် ဂိတ် မဟုတ်လားဗျ။
အားပေးသွားပါတယ် လေးပေါက်ရေ။ ပုံလေးတွေကတော့ ရင်သပ်ရှုမောစရာကောင်းလောက်အောင်လှ
လွန်းတယ်နော် ။ ပုံ-၂ နဲ့ပုံ-၁၂ ကဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာနဲ့မတူပဲ ရောင်စုံပန်းချီကားတစ်ချပ်နဲ့တောင် ပိုတူသ
ဟုတ်ပါသဗျာ အဲဒီနေ့က ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတော့ခြေရှည်ကြည့်တာလေ. မြို့ အထွက် မန်းလေးပြန်ဆင်းတဲ့ဘက်ပေါ့.
မဆိုးသေးဘူးဗျ. ကျနော်မှတ်မိသေးသနော် ကိုပေါက်ရေ။
ကိုပေါက်ရေ. ကလော အမှတ်တရပုံလေးတွေက လှကို လှပြီး
မေဖလားဝါးရေ 2နဲ့12က ကင်မရာမှာပါတဲ့ ဖန်ရှင်တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီးရိုက်ထားတော့သဘာဝထက်ပိုသော
အချို့သောတိမ်ပုံတွေကို ဒီဖန်ရှင်သုံးပြီးရိုက်ခဲတော့ အရောင်ပိုစုံတယ်လို့ ထင်ရတတ်ပါတယ်။
သူများ တီထွင်ပြီး အဆင်သင့်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးချထားတာပါ။
ဝင်ရောက် ခံစားကြည့်ရှုသွားပါတယ်ဗျာ။ “ကလောအလွန် တဘူတာဝယ် တွေ့ခဲ့ကြရတယ်” ဆိုသလိုပေါ့။ အဲဒီဘက်က ထမင်းဆိုင်တွေက စားရတာ သိပ်အရသာရှိတယ် လို့ထင်တယ်ဗျာ။ အကို့ ပို့စ်မှာ ကျနော်ကွန်မန့် ဝင်ရေးတာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပေမယ့် ဓတ်ပုံတွေကို ဝင်ကြည့်နေတာတော့ ကျနော် စာမရေးခင်ကတည်းကပါ။ အကိုမှတ်မိမှာပါ။ မန္တလေးက အာဇာနည်ဗိမာန် ကိစ္စကတည်းက ပဲဗျ။ နောက်လဲ များများတင်ပေးပါဗျာ။
ကွန်မန့် ဝင်မရေးဖြစ်သေးတာက ကျနော်က ဓတ်ပုံပညာကို သိပ်မကျွမ်းလို့ပါ။ အားပေးနေပါတယ်။
ရှု့ ခင်းတွေ လှတယ်ဗျာ
သဘာဝကို တင်ဆက်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်
ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်လို ခံစားသွားကြောင်း
ကိုပေါက်နဲ့ ကင်မရာဆရာများကို ကလောမြို့ ဘူတာရုံ ရဲ့ အရှေ့ ဘက် တောင်တန်းလေးပေါ်ကို အလည်သွားစေချင်သဗျား ။ စိမ်းလန်းအေးချမ်းလှပတဲ့ တောနဲ့ တောင် သဘာဝ မြင်ကွင်းတွေရယ် ၊ နောက်ပြီး အဲ့တောင်ပေါ်မှာ ၊ ရှေးအင်္ဂလိပ်ခေတ်က လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ၊ အုတ်ခံ လက်ဝှေ့ စင် တစ်ခုရှိတယ် ။ ခရီးသွားရင်းမောတယ်ဆိုရင် လမ်းဘေးတွေမှာ ခြူးသီးပင်လေးတွေ အနှံ့ အပြား ပေါက်နေတာမို့ ၊ အလွယ်တကူ ခူးစားရင်း ရေငတ်ပြေနိုင်ပါတယ် ။
ကိုပေလဲကလောရောက်ဖူးတယ်လား။ မှန်၏။ လေးပေါက်နောက်တခါကိုပေပြော တဲ့နေရာတွေသွားပါ။ အဲဒီခြူးသီးပင်တွေတောင်ရှိပါ့အုံးမလားမသိဘူးနော်။ တောင်တွေတောင် ဂတုံးတွေဖြစ်နေတာ။ ကျွန်မတို့တုန်းကလဲ ဆော့လိုက် မောရင်အဲအသီးတွေခူးစားလိုက်နဲ့။ ပြန် မရ နိုင်တော့တဲ့ ငယ်ဘ၀လေးပါ။ ဒါပေမဲ့အခုအဲအသီးတွေ ခူးစားဆိုရင်တောင် ရေမဆေးလို့ ဘာလို့နဲ့စားရဲပါတော့မလားမသိဘူးနော်။
လေးပေါက်ရေ နံပါတ်4 နဲ့ 12 ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်…
လေးပေါက် လမ်းမကြီးတွေ မြင်တော့ ဒီလမ်းမကြီးရဲ့ ဘေး ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သွားသတိရပြီး လွမ်းသွားတယ်။
အနော်လည်း ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်တိုင်း လမ်းမကြီးရဲ့ ဘေးမှာ မထင်မှတ်ပဲ ခဏခဏ ရိုက်ဖြစ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက စလေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သရပါတံခါးရှေ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ တမင်တကာ လမ်းမအလယ်ကောင် တက်ရိုက်တာ တော်သေး ကားတိုက်ခံရတော့မလို့ ။
စိမ်းလန်း အေးချမ်းတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း
ပုံတွေက စိမ်းနေတာပဲဗျာ ..
နံပါတ် ၁၆ နဲ့ အောက်ဆုံးပုံ ရိုက်ချက်တွေက လန်းသဗျို့ …
အဲတော့ ဆရာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကို အမြန်ပြေးလုပ်.
အခုလို ပုံတွေတင်ပေးတော့ မိတ်ဆွေတွေ ကြည်နူးနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။
(၁၃)ကို Google+ မှာတင်ဖို့ ကူးမယ်နော်။ အရင်ကူးထားတဲ့
ကျနော့်မှာဓါတ်ပုံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သီအိုရီတွေ အတတ်ပညာတွေ မရှိပါဘူး ညလေးရေ
မြင်သမျှလေးကို ကင်မရာက ဖန်တီးပေးတဲ့အတိုင်းပြန်တင်ပြပေးတဲ့အဆင့်ပါခင်ဗျာ
လှချက် ဘာမှကိုအထူးတလည်ချီးမွမ်းစရာကို မလိုတော့ဝူး။အားလုံးပြည့်စုံပါ၏။ :-)
ကလောက ဟိုတယ်ပေါပြီးဈေးကြီးဆို နိုင်ငံခြားသားတွေက လာတည်းကြလို့ပေါ့။
……… ကလောမြို့ကိုရောက်တယ် …..လျှောက်လည် ။
လေးပေါက်ရေကျေးဇူးပါ ။မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကို ဓာတ်ပုံကနေတဆင့် အရောက်သွားလိုက်ပါပြီ ။
လေးပေါက်ကျေးဇူးကြောင့် ကလောမြို့သို့ အလည်တစ်ခေါက် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
စိမ်းစိမ်းစိုစိုတွေ မြင်ရတာ စိတ်ကို ပိုပြီး လန်းဆန်းစေတယ်။
ဒီပို့စ်ကိုမန့်တာ သုံးခါရှိပြီ error ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ
ဓာတ်ပုံကောင်းတွေရဖို့ တကူးတက အချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ဖူးမှ သိပါတယ်။
အကြောင်းမညီညွတ်တာနဲ့… နဲ့ …. နဲ့…..
မမရေ ကျနော်က ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
သွားကြစို့ဆိုရင် ကျနော်က အမြဲပျောက်နေတာ။
နေရာတစ်နေရာရောက်ရင်လဲ သူများတွေက ပြန်ချင်ပြီ။
အူးလေးပေါက်တို့ က.သွားနိုင်ရိုက်နိုင်တော့ ကျုပ်တို့ လဲ နေရာစုံပဲ ရောက်ရပါပကောဗျ..
နံပါတ် ၃ ရိုက်တုန်းက တိမ် ဘယ်ရောက် နေတုန်း outdoor ရိုက်ရတာ အဲ့လို ပဲ .. အချိန်ကလဲ ကုန် လူကလဲ ပင်ပန်း .. တော်ရုံ ဇွဲနဲ့တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး…
12..စိမ်းစိုနေတဲ့ စိုက်ခင်းနဲ့ တောင်တန်း
ကလောမြို့ ရဲ့ အလှဆုံးမြင်ကွင်းလေးတွေပါလား…
အားပါး ရဲပဒေါင်းကို ခတ်နေတာဘဲ ။ ဘယ်ကိုယ်မေကိုယ်ချစ် / ကိုယ်ဖေကိုယ်ချစ် က ကမြင်းသွားတာတုန်း ၊ ချစ်ချင်ရင် ဂေဇက်က လူပျိုသိုးတွေကို လာချစ်စမ်းဘာ ။
ဒီထဲမှာ ရှိသမျှ ကွန်မန်းတွေ အကုန်လုံး အနီ တွေ ရဲ နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိဘူး။
အနီပေးတယ်ဆိုတာ အမြင်ကပ်တယ်လို့ ပိုစ်တင်တဲ့သူကို သက်သေပြတာပါတဲ့။